Cleaning Contractors in Connecticut
Shicilela uhlu Engeza
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi sebhizinisi Ukuhlanza Amakhontrakthi Connecticut
I-1 - i-1 yohlu lwe-1
Isevisi yokuhlanza yaseBurgos
I-Burgos Cleaning Service ibheka kakhulu emkhakheni wokuhlanza wezohwebo, wezobunhloli kanye nowamahhovisi. Ukusebenzela izwe lonke e-Connecticut kanye nezifunda ezakhelene nayo siyaziqhenya ngokunikeza ikhwalithi enhle kakhulu nenani lezidingo zakho zokuhlanza. Sithemba ukukunikeza ukwaneliseka kwe-100%
Published by SparklingMegan
buka Ukuhlanza Amakhontrakthi eshicilelwe Izinyanga 4 edlule
Khetha isigabaNgokuvamile izindawo zokulala Amakamelo SpareAmakhaya okuhlala Izindlu Izindawo Amafulethi Amakamelo I-Condos Amaholide Amayunithi studios Ama-villas Amakhishi Izibunu Amakhaya Amakhaya AchithiweIzinkatho zomhlaba Umhlaba wokuhlala Umhlaba Wezolimo Umhlaba WezimboniAmagaraji nezindawo zokupaka izimoto Ukupaka amagalaji Izindawo zokupakaIzakhiwo Zokuthengisa Zezebhizinisi Amahhotela Izikhala zehhovisi Izakhiwo zebhizinisi Izakhiwo zokuqokwa kwamahhala Izakhiwo zezimboni Izikhala zempahlaBonke Abanye Abathengisi Bonke Abanye Abathengisi Izindlu Zemvelo Izakhiwo Nezindawo ZangaphandleIsiqondisi sebhizinisi Abahlinzeki Bezimali Ngezimali Izinkampani Ezihambayo Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya Izinsizakalo Zokuhlola Ikhaya Izinkampani Zokwakha Ukuhlanza Amakhontrakthi Izinsizakalo Zokuqamba Ukulawula izinambuzane Izinkampani zefenisha Imisebenzi Yomshuwalense Izinsizakalo ZokudwebaIsiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo Abathengisi bezindlu Abathengisi Bezakhiwo Ukuhlaziywa Kwezezakhiwo Abaphathi Bezakhiwo Ukuhweba Ngezakhiwo
Noma iyiphi inombolo yamakamelo
Khetha inani lamakamelo
Izinsuku ze-2 ubudala
Isonto le-1 ubudala
Amaviki we-2 ubudala
Ukufakwa kuhlu kuphela ngesithombe
Bhalisela kulokhu kusesha
Ubhalisele ngempumelelo ekuqwashiseni! Uzokwamukela isaziso ku-imeyili yakho uma ngabe kunohlu olusha olufana nenqubo yakho yokusesha.
Kube nephutha phakathi kwenqubo yokubhalisa! Ufake ikheli le-imeyili ngefomethi engalungile noma awuzange ufake ikheli le-imeyili.
Usuvele ubhalisile kuloluosesho. Ungathola izexwayiso ozibhalisele i-akhawunti yakho.
Cleaning inqubo yokususa izinto ezingafuneki, njengodaka, ama-gciwane angatheleleki, nokunye ukungcola, entweni noma endaweni ezungezile. Ukuhlanza kwenzeka ezimeni eziningi ezahlukahlukene, futhi kusetshenziswa izindlela eziningi ezahlukahlukene. Imisebenzi eminingi yenzelwe ukuhlanza.
I-Connecticut ((lalela)) iyisifundazwe eseningizimu impela esifundeni sase-New England e-United States. Ngokubalwa kwe-2010 Census, inengeniso ephezulu kakhulu ye-per-capita, i-Human Development Index (0.962), kanye nemali engenayo yasekhaya e-United States. Imngcele weRhode Island ngasempumalanga, iMassachusetts ngasenyakatho, iNew York ngasentshonalanga, kanye neLong Island Sound ngaseningizimu. Inhlokodolobha yayo yiHartford futhi idolobha layo elinabantu abaningi kunazo zonke yiBridgeport. Iyingxenye yeNew England, yize izingxenye zayo zivame ukuhlukaniswa neNew York neNew Jersey njengendawo yase-Tri-state. Lesi sifundazwe siqanjwe ngomfula i-Connecticut, cishe indawo ethatha isimo. Igama elithi "I-Connecticut" lisuselwa kupelepele ehlukahlukene yegama le-Algonquian elisho "umfula omude odla izindwani." Abahlali baseConnecticut bokuqala abahlali base-Europe kwakunguDenmark abasungula indawo encane, ehlala isikhashana ebizwa ngeFort Hoop eHartford ekuvunyelweni kwePaki neConnecticut Imifula. Ingxenye yeConsticut ekuqaleni yayiyingxenye yekoloni laseDashi iNew Netherland, okubandakanya umhlaba omningi phakathi kweConnecticut neDelaware Rivers, yize izindawo zokuqala ezinkulu zasungulwa kuma1630 ngamaNgisi. UThomas Hooker wahola iqembu labalandeli abavela eMassachusetts Bay Colony futhi wasungula i-Connecticut Colony; abanye abafokazi abavela eMassachusetts basungula iSybrook Colony neNew Haven Colony. Amakoloni amaConsticut neNew Haven asungula amadokhumenti we-Fundamental Orders, abheka izimiso zokuqala eMelika. E-1662, la makoloni amathathu ahlanganiswa ngaphansi kweshadi lasebukhosini, okwenza i-Connecticut yaba ikholoni lomqhele. Lokhu bekungenye yamaKhoramu ayi-13 anqabe ukubusa kweBrithani ku-American Revolution. I-Connecticut ngumbuso wesithathu omncane kakhulu endaweni, i-29th inabantu abaningi kakhulu, kanye nesine esinabantu abaningi kakhulu be-50. Yaziwa njenge- "Constitution State", i- "Nutmeg State", "Providence State", kanye ne "Land of Steady Habits". Kwakunomthelela ekuthuthukiseni uhulumeni wobumbano wase-United States (bona i-Connecticut Compromise). UMfula i-Connecticut, Umfula iThames, kanye namachweba eduze kweLong Island Sound kunikeze iConnecticut isiko eliqinile lasolwandle eliqhubeka namuhla. Umbuso uphinde ube nomlando omude wokusingatha imboni yezinsizakalo zezezimali, kubandakanya nezinkampani zomshuwalense eHartford kanye nezimali zethango eFairfield County.
Ikhaya Mayelana Blog Zamanani Ibalazwe Zikhiphe ohlwini Contact
Izincazelo zezakhiwo nemininingwane ehlobene eboniswe kuleli khasi, izinto zokuthengisa ezinikezwe ngumkhangisi, futhi azihlanganisi imininingwane yempahla. Sicela uxhumane nomkhangisi ngemininingwane ephelele nemininingwane engaphezulu.
Ozakwethu Abahlinzeki bemininingwane ThwebulaSibhalele okuthunyelweTOSInqubomgomo yobumfihlo
Le webhusayithi isebenza nge-Azandt Media Ltd, inombolo yenkampani yase-UK 11728390
Okusanda kufakwa ohlwiniIntengo ephansi kuqalaIntengo ephezulu kuqala
Zonke izigabaNgokuvamile izindawo zokulalaAmakhaya okuhlalaIzinkatho zomhlabaAmagaraji nezindawo zokupaka izimotoIzakhiwo Zokuthengisa ZezebhizinisiBonke Abanye AbathengisiIsiqondisi sebhizinisiIsiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo
Ukubuka kwegalari Ukubuka kuhlu
Noma yikuphi ukuthengiselanaThengisaThengaQashaExchange
Noma yisiphi isimoNewUsed
Noma yimuphi ubudalaUsuku lwe-1 ubudalaIzinsuku ze-2 ubudalaIsonto le-1 ubudalaAmaviki we-2 ubudalaInyanga ye-1